Fandaharanasa “Exchange Live” hitrandrahana ny fipongatry ny fikatrohana nomerika ho an’ny fiteny teratany · Global Voices teny Malagasy
Fandaharanasa “Exchange Live” hitrandrahana ny fipongatry ny fikatrohana nomerika ho an'ny fiteny teratany
Tongava hiaraka aminay ny 12 Aogositra
Voadika ny 08 Aogositra 2020 6:08 GMT
Fiarahana miasa amin'ny Masoivoho Kanadiàna ao Meksika, tongava manatevina laharana anay mandritra ny andiany fahatelo amin'ny fifanakalozana ety anaty aterineto afantoka amin'izay fomba ataon'ireo vondrompiarahamonina teratany ao Meksika sy Kanadà naneken-dry zareo ny teknolojia sy ny aterineto ho toy ny fitaovana entina mampiroborobo sy manome aina vao ireo fiteny teratany any amin'izy ireo, mahazo tombontsoa sy misy fiantraikany amin'ireo andian-taranaka vaovao tena antenaina hiteny azy.
Alarobia 12 Aogositra 2020 @ 11:00 ora maraina (CDT/Mexico City)
Fandefasana mitohy #2 – “Fifanakalozana mivantana: Vina sy traikefa miaraka amin'ny fikatrohana nomerika ho an'ireo fiteny teratany” Misoratra anarana mialoha eto.
Tongava manatevina ireo tarikay mpampiantrano izay hitarika antsika arakaraky ny hirosoantsika amin'ny fitrandrahana ny fikatrohana nomerika ho an'ireo fiteny teratany ao anatin'ity fandaharanasa fandefasana ny “Fifanakalozana Tsy Miato” ity. Misy ireo vahiny manokana nasaina, hasongadin'ity fandaharanasa ity ireo traikefa sy vina momba ny anjara raisin'ny teknolojia sy ny aterineto amin'ireo ezaka fanomezana aina vao indray ny fiteny, na ao Meksika izany, na any Kanadà.
Hanaovan'ny fandaharanasa jeritodika ihany koa ireo ezaka vitsivitsy tany am-piandohana natao hamondronana sy hanamoràna ny fampifandraisana ireo vondrompiarahamonina teratany ao Meksika izay naka sy nampivady ny teknolojia amin'ny asa ataony, hatramin'ny fandinihana ireo fomba fijrey isankarazany ny hoe inona marina no lazaina fa fikatrohana ho an'ny fiteny teratany. Handre ihany koa isika avy amin'ireo tetikasa feno fahaizamamorona sy ifandrimbonana ao Kôlômbia Britanika momba ny dingana ataon-dry zareo hanohanana ireo vondrompiarahamonina Firenena Voalohany izay maniry ny hampiditra ny teknolojia arakaraky ny filàn-dry zareo nofaritany manokana. Hisy ihany koa ny lahatsary ifampiresahan'ireo mpisolovava ho an'ny fiteny sy ireo mpikatroka avy amin'ireo faritra roa ireo. Aza misaraka amin'ny kaonty Twitter @ActLenguas mba hahazoanao topimaso momba ireo vahiny vitsivitsy hiseho ao.
Singa iray hafa manandanja amin'io fandaharanasa io ny fampiatiana ireo tamberina sy ireo endrika hafan'ny fandraisana anjara tamin'ny media sôsialy avy amin'ireo mpanarakana ny fandaharanasa.
Ity fandaharanasa ity dia tontosaina ao anatin'ilay fandaharanasan'ny Tsenabe Nasiônalin'ireo Fiteny Teratany (FLIN ho an'ny fanafohezana azy amin'ny fiteny Espaniôla ) karakarain'ny Ivontoerana Nasiônalin'ireo Fiteny Teratany (INALI ho an'ny fanafohezana azy amin'ny fiteny Espaniôla) ao Meksika, izay atao ny 9 Aogositra – 25 Novambra 2020.
Fandaharanasa azonao jerena mandeha ao amin'ny pejy Facebook ActivismoLenguas sy ny Fantsona Youtube an'ny Rising Voices. Mariho fa: ny fiteny voalohany ampiasain'ilay fandaharanasa dia ny espaniôla noho ny sehatra nosafidiana, saingy hisy ihany ny dika amin'ny fiteny anglisy hatolotray amin'io fandraketana io.
Kiado Cruz (@Kiadorindani)
Sasil Sánchez (@lussasil)
Marco Martínez (@AyookMarco)
Yazmín Novelo (@yaznovelo)
Azia Atsinanana 15 ora izay
Azerbaijan 1 andro izay
Nilaza fa nijirika ny rafitra lalamby ireo mpikatroka anjotra Belarosiana mba hanoherana ny hetsiky ny miaramila Rosiana